Torohevitra sy torohevitra momba ny fahasalamana ho an'ny toeran-kafa telo samihafa (II) | Vaovao momba ny dia
Torohevitra sy torohevitra momba ny fahasalamana ho an'ny toerana telo samihafa (II)
Carmen Guillen | | soso-kevitra, Tsangatsangana
Omaly izahay no nitondra anao ny lahatsoratra voalohany amin'ireto tolo-kevitra ireto sy torohevitra momba ny fahasalamana, izay azonao vakiana amin'ity rohy. Androany izahay manome anao vaovao momba izany, fa amin'ity indray mitoraka ity dia manara-maso Toerana 3 samihafa. Aiza no halehanao manaraka? Raha te hahafantatra ianao hoe inona ny vaksiny ilaina mba handehanana any amin'izay tianao haleha, dia ampahafantaro anay ao amin'ny faritra misy ny hevitra, ary hamaha ny fisalasalanao ...
1 Handeha any Arabia Saodita ve ianao?
1.1 Data tokony ho fantatrao
1.2 Vaksiny voatondro sy takiana
2 Handeha ho any India ve ianao?
2.1 Data tokony ho fantatrao
2.2 Vaksiny voatondro sy takiana
3 Ho any Jordania ve ianao?
3.1 Data tokony ho fantatrao
3.2 Vaksiny voatondro sy takiana
Handeha any Arabia Saodita ve ianao?
Raha tsy ela dia manana diany kasainao mankany Saudi Arabia ianao, na noho ny antony miasa na fialam-boly dia tokony ho fantatrao daholo ny momba an'io firenena io.
Data tokony ho fantatrao
Ny renivohitr'i Saudi Arabia dia Riad ary ny fiteny ofisialy dia Arabo. Ny isam-poniny dia mahatratra 22.000.000 XNUMX mahery ny isan'izy ireo ary ny vola riyad dia ny Saudi riyad.
Ten mitandrema amin'ny mari-pana arakaraka ny vanim-potoana itetezanao, satria firenena mafana be izy io. Ny mari-pana mandritra ny volana fahavaratra dia mety mihoatra ny 45ºC ary mandritra ny ririnina dia manodidina ny 25ºC ny mari-pana eo ho eo. Kely ny orana any, fa rehefa avy kosa ny vitsy, dia eo anelanelan'ny Novambra sy Febroary ary mandritra ny volana Mey.
Vaksiny voatondro sy takiana
ny vaksiny Soso-kevitra dia ny kalandrie vaksiny ofisialin'ny vaksiny, izay hazonintsika rehetra hatrany.
Amin'ny lafiny iray, ny vaksinina takiana, tahaka ny nitranga tany amin'ny firenen-kafa izay efa hitantsika teo aloha, dia ny an'ny Tazo vony mpandeha antitra mihoatra ny 1 taona izay avy any amin'ny faritra mety ahiana ny hamindra io aretina io na ireo hafa izay nandany 12 ora mahery tany amin'ireo toeram-piantsonanan'ny seranam-piaramanidina amina toerana misy Fever Yellow
Amin'ny lalan-kafa, ho an'ireo mpivahiny ao amin'ny Umrah sy Hajj Ilaina ny taratasy fanamarihana ny fanaovana vaksiny miady amin'ny meningiteza meningococcal quadrivalentes, gripa ary polio.
Handeha ho any India ve ianao?
Ho an'ireo izay tia ahy, manonofy handehanana any India, fa tsy toa ahy, efa azon'izy ireo avokoa izay rehetra ilain'izy ireo hanatanterahana izany nofinofy izany, eto izahay dia mamela anao miresaka momba izay rehetra tokony ho fantatrao momba ity firenena mampiavaka sy tokana ity.
Ny renivohiny dia New Delhi ary ny fiteniny dia Hindi. Betsaka ny isan'ny mponina ao aminy ankehitriny: 1.040.000.000 no mponina ao aminy.
Su Sandam-bola is the Rupee Indiana ary raha ny anao toetr'andro Azontsika atao ny milaza fa azo zaraina ho fizaran-taona telo: hatsiaka (manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny febroary), mafana (manomboka Martsa ka hatramin'ny Jona) ary orana (manomboka amin'ny Jona ka hatramin'ny Septambra). Eo anelanelan'ny volana Jona sy Oktobra dia mety hisy tranga mitokana amin'ny monsoons.
Ny vaksiny tokana takiana tahaka izany dia ny an'ny Tazo vony. Raha tonga ianao nefa tsy manana taratasy fanamarihana vaksinin'ny tazo mavo, dia azo atokana mandritra ny 6 andro ianao raha mihaona amin'ireo Anarana iombonana:
Vao avy tonga ianao taorian'ny 6 andro nitsidihanao firenena iray tandindomin-doza Yellow Fever na nitety io faritra io, na dia tsy nijanona aza ianao.
Tonga amin'ny sambo iray ianao izay nandao na nikasika seranana iray izay hita tao amin'ny faritra misy tazo mavo, na dia 30 andro aza taorian'izay.
Na farany, raha tonga amin'ny fiaramanidina ianao, izay, efa tao amin'ny faritra mety hampidi-doza ianao, dia tsy voan'ny otrikaretina mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ny Fitsipika Indiana momba ny fitaterana an-habakabaka.
Raha ny momba ny vaksiny naroso dia tsy maintsy havaozina amin'ny daty rehetra amin'ny vakisintsika ny kalandrie ofisialy.
dia ahiana voan'ny tazo manerana ny firenena ambanin'ny 2.000 metatra ny haavony.
Ho any Jordania ve ianao?
I Jordania dia any avaratr'i Arabia Saodita, ary mifanitsy amin'i Iràka, Israel ary Syria. Raha mandeha any ianao dia izao no tokony ho fantatrao.
Ny renivohitr'i Jordania dia Amman ary 800 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ny fiteny ofisialy dia Arabo ary ny volany ny Dinar Yordania. Misy mponina lehibe kokoa noho 5.000.000 XNUMX ny mponina ary amin'izao fotoana izao dia manana faritra ady sasany, fa araka ny efa nolazaintsika tamin'ny tranga hafa, firenena iza no tsy manana azy ireo?
Vaksinim-bidy ilaina: Fanaviana mavo amin'ny olona antitra mihoatra ny 1 taona.
Vaksinina atoro anao: Ireo naseho tamin'ny kalandrie vaksinim-panjakana.
Ireto ny firenena 3 izay atrehantsika ankehitriny: Arabia Saodita, India ary Jordania. Araka ny efa nolazainay tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, avelao aminay ny fanontanianao momba ny firenena hafa ao amin'ny faritra misy ny hevitra ary hiresaka momba azy ireo amin'ny lahatsoratra hafa izahay. Misaotra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Torohevitra sy torohevitra momba ny fahasalamana ho an'ny toerana telo samihafa (II)
Fetibe voninkazo 4 tsara tarehy any Espaina izay hahagaga anao
Fitsidihana ny tany efitra Tabernas na ny Espana Far West